CAYAYAANKA UGU CAANSAN EE ISTEROBERI IYO KANTAROOLIN WAX KU OOL AH. - KU'SAABSAN
Dhammaan dalagyada miraha waxay ku dhacaan weerarrada cayayaanka, iyo isteroberi ma aha mid ka reeban. Ha qaadan wax macquul ah si aad u ilaaliso geedaha ugu yaraan si taxadar la'aan ah, maadaama ay taasi keeni karto oo kaliya dhimashada dalagga, laakiin geedka oo dhan.
Marka la eego sidan, beeralayda nooceeda ah ayaa aad uga welwelsan su'aasha: "Waa maxay cayayaanka halis ah, maxaad u malaynaysaa in aad u baahan tahay si aad u isticmaasho cayayaanka pear si aad uga baxdo geedka weligiis?" Oo sidaas daraaddeed, si aysan u argagixin balastar ama balastar ku on pear ah, cadowga waa in loo yaqaanaa qof ahaan.
Hawthorn waa mid aad u muuqda, oo leh geedo waaweyn oo geed ah, cayayaanku si dhakhso ah ayuu u cunayaa dhammaan ubaxa, ugxan iyo cagaarka. Ka dib isaga, wuxuu ka tagi doonaa oo keliya dhaan, laamaha gnawed.
Cayayaanka Hibernates ee guriga caleemaha qallalan ayaa ku wareegsan tuubo, taas oo ay la wadaagaan cobwebs. Waa mid aad u fudud in la helo qalab diirran xilliga dayrta goor dambe, marka geedku horay u lumay caleemo kasta.
Waa muhiim! Waqtiga daaweynta cayayaanka iyo cayayaanka carrada ayaa kaa caawin doona si deg deg ah u burburiyaan cayayaanka.
Natiijooyinka wanaagsan waxaa helaya ururinta iyo burburinta cayayaanka cayayaanka cayayaanka. Xilliga dayrta, ka dib markii caleen dayrta, waxaa lagu talinayaa in laga saaro caleemaha caleenta ah geedaha sida meelo jiilaal oo cayayaanka. Dufanka Hawthorn waxaa badanaa la degaa habeenkii oo ah cawska ubax ee koraya beerta, laga bilaabo halkaas oo lagu soo ururin karo goor dambe fiidkii ama subaxa hore.
Dhab ahaantii aboor ku xiga wax yar ma khatar badan yihiin haweeneyda. Wingspan ee cayayaanka labka ah waa 3 sentimitir, halka dhedigga ah ayaa hoos u kiciyay baalasheeda, si aanay u duuli karin. Dumarka cayayaanka waxay leeyihiin midab casaan ah, caloosha oo barara iyo lugaha dhaadheer.
Dadka waaweyni waxay gaaraan dherer 28 mm, jirkoodu wuxuu leeyahay midab huruud ah-cagaaran. Roobkani ma aha mid picky ah oo si farxad leh uga tagay dhammaan geedaha midhaha, nibbling burooyinkeeda, caleemaha iyo ubaxa.
Waa muhiim! Si loo baabi'iyo isticmaalka cayayaanku wuxuu la mid yahay sidii loola dagaalami lahaa hawada.
Si aad u baabbi'iso aboorka jiilaalka waa dhirta buufin ka hor inta aan ubaxin cayayaankaassida "Zolon", "Metathion", "Nexin", "Chlorophos" ama "Olekuprit".
Si loo dhamaystiro suurtagalnimada cayayaanka cayayaanka, waa in la burburiyaa weelka caarada leh, si nidaamsan nadiifinta cayayaanka dhulka iyo moos, iyo sidoo kale xaddidaadda gooyooda.
Ka dib markii pear uu yaraaday, waxaa lagama maarmaan ah in la qodo dhul xuduud u ah jirridda, kaas oo gacan ka geysan doona in la burburiyo jaranjarada dabiiciga ah.
Natiijooyinka ugu fiican waxaa lagu helaa suunka xayawaanka ee geedka geed, taas oo aan u oggolaan doonin in dheddigga cayayaanka ay u dhex gasho taajka, waana inay ukumo dhigaan geedka hoose, halkaas oo si sahlan loo burburin karo.
Geedka Galitsa - Cayayaanka oo badanaa ku buufiya isjirrada iyo naga celiya miraha dhadhan fiican leh. Dadka waaweyni halis uma ahan in ay isubaystaan, laakiin dirxiga ay si fudud u burburin karaan miraha oo dhan.
Dirxiga Cayayaanka waxay leeyihiin jirka is dulfuulan, koofiyad madax ah oo si fiican u horumarsan iyo si siman u dhaqdhaqaaqa, ka soo horjeeda midab kale oo adag afka.
Ku xoqidda unugyada dhirta, dirxiga ayaa dhalin kara koritaanka caanaha oo kale ah. Cayayaanka ayaa saameeya ugxan-miro iyo quudinta saxarada, tani waxay sababtaa in waqti ka dib miro uu madow noqdo, joojiyaa horumarkiisa iyo dhacdooyinka.
Kiimikada miraha ku'saabsan
Kiimikada miraha ku'saabsan - Tani waa cayayaanka yar ee midabada madow, taas oo muuqaalkeedu aad u la mid yahay kaneecada waxayna ku dhowaad 4 millimitir oo cabbir ah. Dirxiga cayayaanka wuxuu ku quudiyaa unugyada miraha iyo caleemaha geedaha.
Cayayaanka waa waxyeello u geysanaya geedaha yaryar, iyo sidoo kale kuwa la gooyey. Sidoo kale, cayayaanku wuxuu geli karaa qolka qoryaha, oo quudinta unugyada uurjiifka.
Waa muhiim! Haddii xabbad yar oo khudradda caleenta ah loo yaqaan 'pear pear pear' ama 'pear pear' saaliga ah ee beertaada, waxaa ugu wanaagsan in aan dib loo dhigin dagaalka muddo dheer. Si loo burburiyo cayayaanka, dhirta waxaa la buufiyaa inta lagu jiro qiyaasta ukunta ee leh Chlorophos, Phosphamide, ama Metaphos.
Cayayaanka xasharaadka oo saameeya isunawada kaliya - pear sawfly. Qof qaangaar ah wuxuu leeyahay dhererka jidhka 5 ilaa 6 millimitir. Dumarka waxay jiifaan hal ukun oo burooyinkooda la furay, iyagoo waxyeeleynaya sifaha hoose ee salka iyo xargaha.
Dirxiga wuxuu kudari karaa dhexda dhexe ee ugxan iyo quudinta asaasiga, ka dib markii ay u wareejiyaan miraha deriska ah. Inta lagu jiro mudada nuujinta firfircoon, hal canug ayaa waxyeello u geysanaya 3 ilaa 4 miro. Waxay cuntaa qolka qoryaha iyo miraha, iyadoo natiijada miraha ay madow ku dhacdo oo dhacdo waqti ka dib.
Si looga fogaado weerar weyn oo cayayaanka, bilawga geedka ubax lagu daaweeyo sunta cayayaanka. Haddii wakhti aan la dhaafin oo cayayaanka ay waxyeeleeyeen midhaha, ka dibna waxaa lagu ruxaa qashinka oo lagu aasaa qoto dheer oo ah ugu yaraan 50 sentimitir, taas oo ka fog ka faafitaanka cayayaanku.
Waa muhiim! Si aad u baabbi'iso cayayaan, taajkii geed ayaa lagu buufiyaa xeryaha organophosphate, pyrethroids, neonicotinoids. Moobeydu waa in la sameeyaa 5 ama 6 maalmood ka hor inta aan ubaxin ama isla markiiba dhammaystirka ka dib.
Si looga fogaado faafidda bakteeriyada pear ee beerta, waa in ay raacaan xeerarka aasaasiga ah ee daryeelka geedka iyo si nidaamsan u qodo ciidda ku xeeran, waxaa sidoo kale lagu talinayaa in la soo ururiyo laguna burburiyo hudheelada cayayaanka ee cayayaanka.
Pliers sida noocyada kale ee cayayaanka cayayaanka ayaa burburin kara nolosha ninkii beerta ka shaqaynayay. Caaradu waa qayb ka mid ah xayawaannada - kaniiniyada microscopic ee fasalka arachnid kaasoo keeni kara waxyeelo weyn xagga dhirta.
Ma taqaanaa? Haddii mid kasta oo haweenku ay ka badbaado 50 dirxi (xaqiiq ahaan, waxay ku xiran tahay ilaa 200 ukumood), ka dibna siinaya 15 jiil sannadkii, cayayaanka ayaa dabooli doona adduunka oo lakabka laba-mitir ah.
Caarada khudradda cagaaran
Caarada khudradda cagaaran halis u ah dhammaan miraha miro, laakiin geedka ugu weyn waa tufaax. Dumarku waxay leeyihiin jir ballaaran, oo dhererkoodu yahay 0.5 ilaa 0.6 millimitir. Jirka jidhka waa mid aad u sarreeya, cayayaanka ayaa leh midab guduudan-casaan iyo lugaha dhaadheer.
Cayayaanka ayaa ka fogaanaya qorraxda tooska ah waxayna soo gashaa qaybta dhexe iyo kan hoose ee geedka.
Galleydii Gall - Kuwani waa dulinada qudaarta oo inta badan sameysma gala ama waxyeelo kale oo loo gooyo unugyada dhirta. Caarada gallaydu waa xajmiga maadada cagaarka ah, midabka casaan ama casaan-cad. Waxay leedahay wareega wareega ama is-goysyada iyo 4-lugood oo lugood ah. Cayayaanka ayaa ku faafaya dabaysha.
Galleyda si farxad leh u caleemaha geedo midho leh, laakiin gaar ahaan ma aha mid aan kala sooc lahayn tufaaxa iyo geedaha geedaha.
Red Apple Tick - Cayayaanka kale ee saameeya geedo waaweyn. Dhererka cayayaanka ee jirku wuxuu gaari karaa 0.6 milimitir, waana adag tahay in la ogaado: waxay leedahay midab casaan leh. Dirxiga ayaa dhasha inta lagu guda jiro ubaxa geedka tufaaxa, sidaa daraadeed waxay u muuqataa in caleemaha geedka ay ku daboolan yihiin ubaxyada guduudan.
Xakamaynta caleemaha, caaradu waxay nuugaan juuska iyaga ka soo baxa, taas oo sababaysa xadgudub ku yimaada dheelitirka biyaha, taas oo horseedi karta hoos u dhac ku yimaada chlorophyll oo hoos u dhigaya geeddi-socodka sawir qaadista. Tani waxay keentaa daciifinta dhirta, waana sababta ugu weyn ee ay u keento miraha yar.
Meelaha laga helo xirmooyinka cayayaanka oo adag ayaa inta badan la sameeyaa, kuwaas oo ah meelo gaar ah oo ku yaal barar..
Si looga fogaado dhaqanka saxda ahwaxaa lagula talinayaa in la nadiifiyo geedaha ka soo jilicsan jirkii xilliga gu'ga iyo fulinta xaddigooda. Hurgun badani ma sameyn karo daaweynta qoryaha ee cayayaankasida "Malathion" ama "Trichlormetaphos".
Intaa waxaa dheer, waxay sahlaysaa burburka tuubada iyadoo la isticmaalayo mukhaadarooyin leh guryaha taramiinada, kuwaas oo awood u leh in ay dhex galaan unugyada geedaha si qoto dheer ah oo aan ku faafin habka xididada. Daawooyinkaan waxaa ka mid ah "Abamectin", oo leh saameyn ku salaysan dareemayaasha.
Kombiyuutar - cayayaan qatar ah kuwaas oo nuugaya dheecaanka ka soo caleemaha geedka, taas oo keenaysa in lakab iyo dhicid. Kobaca iyo horumarinta geedku way hoos u dhacdaa, waxay bilaabataa inay midho dhasho, daciifiso mana u dulqaadan jiilaalka.
Iyadoo infekshin weyn ee caleemaha pear u muuqdaan Honeydewtaas oo ah jawi bacrin ah horumarinta boqoshaada madow.
Si loo yareeyo suurtagalka infekshanka pear, waxaa lagula talinayaa in la nadiifiyo ka soo jilicsan, moss iyo lichen guga. Ka hortag faafidda cayayaanku waxay ku caawin doontaa wakhtiga maareynta sunta cayayaankasida Karbofos, Agrovertin ama Decis.
Ma taqaanaa? Siyaabaha caanka ah, waxay ku fumigating beerta qiiqa tubaakada iyo dhirta lagu buufiyo xal saabbuun iyo saabuun leh oo caddaynaya inay fiican tahay. Qaab kale oo aan caadi ahayn ee wax ka qabashada cayayaan ayaa geedaha ku buufin leh xal xashiish ah. Maydhista, koollada waxaa lagu qasi karaa biyaha oo ah 100 garaam 100 litir oo biyo ah.
Cayayaanka sida Baalallayinta badan booqo beerahayaga. Kuwa ugu khatarsan ee isteroberi ah waa aboor ku baraarugay, aboor ku cad iyo aboor ku tufaaxa. Si ka baxsan, cayayaankaasi aad bay udhexeeyaan inta u dhaxaysa dhibaatooyinka. Balwadku wuxuu dhigaa ukumaha gudaha ubaxa, iyo ka dib markii ay dirxiga u dhalatay, miraha waxyeello qalalan iyo qadhaadh.
Aboorka Oriental - cayayaan khatar ah oo waxyeeleeya caleemaha iyo midhaha dhammaan dalagyada beerta. Kabaalan yaryar oo leh baalasha qotoda dheer. Jirka cayayaanka waa midab madow.
Baalasha hore waxay ku daboolan yihiin qolfaha cad-cad, iyaga oo sameeya jilbaaxo fara badan oo isku dhafan. Baalasha haadku waxay leeyihiin midab khafiif ah iyo midab laf ah. Garbaha waa inuu gaaraa 14 millimitir.
Aboor ku'saabsan - waa munaasabada dhagaxa ah, waxay dhaawici doontaa oo kaliya miraha isteroberi. Cayayaanka ayaa leh dareen gaar ah oo loogu talagalay noocyo hore oo isteroberi ah, maaddaama midhaha ay leeyihiin maqaarka jilicsan.
Baalasha hore ee aboorka ayaa lagu rinjiyey cawl mugdi ah, baalalkuna waxay yihiin cawl cajiib ah. Bishii Luulyo, cayayaanka cayayaanku wuxuu dhacaa, ka dibna haweenku waxay ku dhejisaa midhaha pear. Dirxiga duufaanka ayaa si toos ah u maareynaya midhaha, qaniinyada qolka abuurka, si tartiib ah u cunaa dhammaan abuurka, taas oo keenta dhimashadiisa.
Ma taqaanaa? Roobku ma baxo oo aan ka soo bixin midhaha deriska ah. Ilaa shan dirxi wuxuu noqon karaa hal miro mar.
Codeyn la'aan Codayn
Cayayaanka Beeraha codeynta aboorka wuxuu saameeyaa midhaha dalagyada beerta sida tufaax, isteroberi, fersken iyo plomme. Balastaradu wuxuu leeyahay midab khafiif ah oo madow. Xayawaanka cayayaanka ayaa gaari kara 20 millimitir.
Baraabku wuxuu dhigaa ukunta cagaaran oo cad oo leh dhexroor aan ka badnayn 1 millimitir. Mid kasta oo ka mid ah laga helo pear, tufaax ama dabacsan yar oo siib casaan yar leh oo leh madaxyo bunni, awood u leh si dhakhso ah u burburiyaan dalagga oo dhan.
In dagaalka aboor ku leh Natiijooyinka ugu wanaagsan waxaa bixiya farsamooyinka farsamada, taas oo ka kooban burburinta harta dhirta iyo qashin ka mid ah ciidda aagga jirridda. Si loo yareeyo suurtogalnimada cayayaanka, waa lagama maarmaan in la qaado miraha hoos u dhaca.
Ujeedadaas awgeed, waxaa lagu talinayaa in lagu daboolo aagagga cayayaanka ee daboolka leh, iyo in la leexiyo ama laga qaado isdabamarin ka soo jeeda goobta. Natiijooyin wanaagsan oo bixiya dhirta lagu buufiyo cayayaanka, sida Iskra, Karbofos iyo Fufanon.
Ikhtiyaar ahaan, waxaad isticmaali kartaa Noocyada Cilmi-nafleyda, tusaale ahaan, "Lepidocide". Kuraasta gawaarida ayaa sidoo kale baabi'inaysa cayayaanku.
Munaasabada xaddidan saameeyaa dhamaan geedaha midhaha oo dhan, kuwani waa cayayaanka khatarta ah ee jirridda tufaaxa iyo pear. Cayayaanka ayaa awood u leh in uu ku dhaco dhammaan qaybaha geedka, laakiin gaar ahaan sapwood, jilif iyo cambium ayaa ka imanaya, taas oo horseedi doonta hoos u dhaca kororka geedaha iyo hoos u dhaca wax soo saarka.
Marka cayayaanka la arko, waa lagama maarmaan in si deg deg ah loo bilaabo dagaalka, iyada oo la dheeraynayo in la iska indho tiray dhibaatadu waxay horseedi kartaa burburka dhamaystiran ee geedka.
Digniinta muuqaalka cayayaanka Waxaa lagu talinayaa in laga saaro jilif dhintay oo ka timaada geedka gug walba iyo samaynta dhererka gogolka. Ku rakibidda dabaysha iyo nalka dabiiciga ah sidoo kale waxay keenaysaa natiijooyin wanaagsan.
Caawin waqti dheer ah ayaa ka ilaalisa geedaha cayayaanka ku buufinta xeryaha organophosphorus, saliidaha macdanta iyo pyrethroids.
Mood - Tani waa pear cayayaan kale oo khatar ah, taas oo aan seegi doonin fursad ay ku tijaabiyaan noocyo kale oo geedo waaweyn ah. Baraabku wuxuu dhigaa ukumo, ka dibna miraha ka muuqda qiyaastii 15 millimitir dherer ah, waxyeela midhaha pear, tufaax, duubka iyo miro.
Fruit Moth - aboor ku qurux badan, laakiin dirxiga uu si ba'an u cuni doonaa beertaada. Cayayaanka yar yar wuxuu waxyeelo weyn u geysan karaa geedaha beerta. Dhaqannada waxyeelada ayaa si liidata u kobcaya, noqdaan kuwo daciif ah iyo wax soo saarkoodu hoos u dhaco.
Dhirta cayayaanka ee cayayaanku waxay gaartaa dhererka qiyaastii 5 millimitir, waxay leedahay midab madow ah. Meelaha of isku ururinta ee siisay on caleemaha, formation of miinooyinka cad wareega. Cayayaanka ayaa cunaya hilibka caleemaha iyo miraha, taas oo keeneysa dhimashadooda.
Wax khatar ahna ma leh Baalallay macaan. Waxay ku dhuubaan caleemaha tuubooyinka. Daaruubyada Baalallaygu waa kuwo la yaab leh rabitaankooda: Cunto ma aha oo kaliya caleemaha geedka, laakiin sidoo kale waxay jecel yihiin in la googooyo marinnada midhaha pear iyo tufaax, taas oo keeneysa inay hoos u dhacaan.
Calaamadaha ugu horreeya ee muuqaalka koofiyadaha, waa inaad markiiba ku dhawaaqdo dagaal. Natiijooyinka ugu wanaagsan waxaa lagu helaa nadiifinta caleemo dhacday oo dhirta lagu buufiyo guga horraantii iyadoo la diyaariyay daawooyinka cayayaanka, sida Zolon, Metathion, Nexion, iyo Phosphamide.
Bannaanka waaya-aragnimada leh waxaa lagula talinayaa in lagu buufiyo dhirta qashinka qadhaadh ah iyo saabuunta dharka.
Waa muhiim! Inta lagu jiro dhirta cayayaanka, buufinta cayayaanka waa wax aan fiicnayn sababta oo ah cayayaanku wuxuu ku sii daayaa gudaha gudaha caleen.
Aphid - Tani waa martida ugu badan ee beerahayaga. Bannaanka u badan ayaa sannad walba lagu qasbay in ay burburiyaan deegaannada aphid. Aphids ku dulqaado on dhirta, quudinta on dheecaan muhiim ah ee caleemaha dhalinyarada iyo dhirta dhirta leh phytoviruses khatar ah.
Ma taqaanaa? Guud ahaan, waxaa jira 10 qoys oo dabiiciga ah iyo in ka badan 4,000 oo ah noocyada aphids, iyada oo ku dhowaad 1,000 noocyada kala duwan ee aphids ee ku nool Yurub.
Faashad Cagaaran - Kuwani waa cayayaanka aan macquul ahayn ee pear kaas oo horseedi kara dhimashada geed. Cayayaanka yaryar, degaannada geedaha, si dhakhso ah u dhufanayaan, cayayaanku si gaar ah uma dhicin caleemaha yar yar waxayna ka nuugaan casiirkooda cuntada.
Sida magaca ayaa tilmaamaya dhiiga dhiiga wuxuu leeyahay midab madow. Cayayaanka waxay ku quudinaysaa hadhuudhka dalagyada beerta, iyo haddii aanad bilaabin la dagaallanka cayayaanka waqtigaa, laamaha geedaha waxaa lagu dabooli doonaa boogaha, taas oo keeni karta dhimashadooda.
Ma taqaanaa? Xiddiga dhiigga wuxuu ku dhuftey Yurubta Waqooyiga Ameerika bilowgii qarnigii XVIII.
Ilaa aphids ay sii badisay, waxay u burburiyaan farsamo, si kale haddii loo dhigo, waxay burburinayaan. Laakiin ka dib markii cayayaanka cayayaanka si rugta cufan ee laanta iyo caleemaha geedka, isticmaalka sunta cayayaanka waa lagama maarmaan.
Digniinta faafitaanka geedaha xilliga guga hore lagu daaweeyo 25% hexachlororane budada dhagaxa fosfat ama wuxuu ku kordhiyaa 12% boodhka hexachorane ee ciidda.
Sidoo kale daaweyn wanaagsan dadweynaha aphids waxaa loo tixgeliyaa rushaynta geedaha leh saabuun iyo xal ashtaas oo ah amaan bini-aadanka, laakiin aad u khatar ah cayayaan yar yar.
Flowerbird - cayayaanka aan yareyn oo ka badan midka cagaaran. The epidemic ee duqsiyo ubax waxaa u horseedi kara dhimashada dalagga. Qaar ka mid ah noocyada cayayaanka midabka leh waa cayayaanka loo arko cayayaan qatar ah oo ku quudiya juuska oo ah buro barar ah oo ah geedo geedo ah ama geedo tufaax ah.
Kiimikada carafka - Tani waa cayayaanka ka soo jeeda nidaamka lamaanaha ee ka tirsan qoyska weevil. Xayawaanka noocan oo kale ah pear waa sabab weyn oo walaac leh.
Wuxuu ku qaniinaa koobabka dhogorta ah ee burooyinkeeda ubaxa, kuwaas oo horey u lahaa waqti ay ku shubaan casiir, laakiin weli wali qarxin. Tani waa runtii dhabta ah ee duqsiyo lowska midabka. Weerarka xayawaanka ayaa ah sababta uu geedku u diidayo in uu ubaxo iyo natiijada - ma midho dhalin.
Apple Blossom dibadda u eg oo uu la mid yahay pear saaxiibkiis tsvetoeda. Buulo-buni-cawlan, kaas oo uu leeyahay jir madax dheer, kaas oo uu u isticmaalo inuu nuugo casiir ka kelyaha. Dadka waaweyn waxay ku quudiyaan burooyinkooda iyo caleemaha, halka ay beertu baabi'iyaan oo keliya burooyinkeeda ubaxa ee isteroberi iyo tufaax.
Joojinta jilifka gu'ga iyo xaddidaadda dogobka ayaa gacan ka geysanaya joojinta weerarka cayayaanka. Sidoo kale, natiijooyinka wanaagsan waxay ku siinayaan suunka xabagta xabagta.
Beetleh waxay si fudud isku dayi kartaa inay ruxin taajkii geedkii saarnaa sariirta, ka dibna burburin. Haddii habka farsamda uusan soo saarin natiijooyin, markaa ku buufin dhirta leh sunta cayayaanka, sida "Decis" ama "Kinmic".
Шелкопряд - waa aboor weyn, oo leh garbaha ilaa 8 sentimitir. Rugta xashiishka ee dhererka dhererkeedu wuxuu gaaraa 7 sentimitir wuxuuna leeyahay midab madow ama midab madow.
Ma taqaanaa? Cayayaanka waxay jecel yihiin inay ku cunaan caleemo, ugxan, burooyinkeeda iyo midhaha pear. Xaqiiqada ah in mashiinka kaliya uu cuni karo ilaa 35 caleemo ayaa ka caawin doona sameynta sawir qiyaas ah miisaanka markii uu dhirta uu ku dhaco silkworm..
Silkwormmed - balastar leh wingspan oo ah 32 ilaa 40 millimitir. Cayayaanka ayaa leh midab-buni-bunni ama jaale-huruud ah. Jirka cayayaanka ayaa si ba'an u daboolaya timaha hoostiisa mugdi madow. Dhererka dhererka dhererkiisu wuxuu gaari karaa min 40 ilaa 60 millimitir wuxuuna leeyahay miis-buluug-buluug, oo daboolaya timo cufan.
Ma taqaanaa? Cayayaanka waa halis oo kaliya marxaladda ilmanta, dadka waaweyni ma quudiyaan.
Roobku wuxuu ku dhawaadaa dhammaan geedaha iyo geedaha kaynta. Haddii aanad burburin cayayaan waqti go'an, waxay gebi ahaanba cuni kartaa taajkii geedkii afkiisa.
Aboorka Gypsy Waxay quudisaa in ka badan 300 noocyada dhirta, laakiin saxanka ugu muhiimsan waa pear, geedkii, geedaha iyo geedaha tufaaxa.
Xuubka haweenku wuxuu gaari karaa 75 millimitir. Jirka cayayaanka waxaa lagu daboolay timo madow, baalashu waa cad, jilbaha zigzag waxaa lagu dabaqaa iyaga.
Dharka ayaa gaari kara dhererka ilaa 75 millimitir, jidhkeeduna wuxuu ku daboolayaa timo dheer. Waa mid aad u muuqda, sidaas darteed marka cayayaanka la ogaado, waa lagama maarmaan in la burburiyo sida ugu dhakhsaha badan.
Waa muhiim! Iska ilaali infekshin badan leh silkworm iyo coconopad waxay si joogto ah uula socotaa baaritaanka geedaha si loo ogaado cayayaanka. Marka la ogaado ukunta, waa in si taxadar leh loo soo uruuriyaa oo loo gubaa. Wixii abuur ah oo weyn waxaa lagula talinayaa in aad isticmaasho sunta cayayaanka. Ujeedooyinkaas, si fiican u habboon "Nitrafen". Natiijooyinka ugu wanaagsan waxaa lagu helaa suumanka dabaysha, ka saarida jilifkii hore iyo dhogorka gooyaa.
Coconut - Waa balastar ballaadhan oo leh jidhka timo badan, oo leh madax weyn iyo shaar kulul. Balastaradu waxay leedahay wareega gaaban ee nolosha waxayna leedahay qalliin aan saldhig u lahayn.
Cayayaanka ayaa dhigta ukunta kooxo. Dirxiga Coconut ma aha mid aad u doortay cunto, sidaas darteed waa ku faraxsan yihiin inay soo jiidaan caleemaha geedo midho leh oo dhan iyo xataa irbadaha geedaha.
Ma taqaanaa? Haddii aad si sax ah u ogaato waxa loo daaweeyo isteroberi ee guga ka soo cayayaanka, ka dibna aad ka welweli kartaa ammaanka of dalagga.
Cabsi - Cayayaanka caamka ah. Cayayaanka qaangaarka ah ayaa aad u adkaysi u leh arrimaha keena, taas oo u oggolaanaysa inay u dulqaataan hoos u dhac ku yimaada heerkulka.
Horeba ka dib markii cayayaanka qaangaarka ah ee la daboolay weel dabiici ah, waxtarnimada isticmaalka sunta cayayaanka ayaa hoos u dhacaya. Dibedda, cayayaanka waxay u egyihiin sida xayawaanka loola jeedo, taas oo ah midab bunni ah.
Guga hore, ka hor muuqaalka kelyaha, dhirta waxaa lagu daaweeyaa xal DNOCtaas oo kuu ogolaaneysa inaad ukumi karto ukunta cayayaanka waqtigeeda. Ka dib markii dirxiga dillaacday ukunta, waxaa lagu talinayaa geedo buufin leh cayayaanka ficilka xiriirkaUjeedadaas, "Decis" ama "Kinmic" waa mid aad u fiican.
Doorka ugu weyn ee looga hortago dhirta geedaha ee cayayaanka waxaa ka mid ah tallaabooyinka ka hortagga agrotechnik, taas oo ka kooban in la gooyo cayayaanka hore, caleemaha dharka, ururinta iyo burburinta cayayaanka cayayaanka iyo qodidda ciidda agagaarka jirkiisa. Kaliya dabeecad u fiirsasho leh geedaha iyo xakamaynta cayayaanka waqtigeeda ayaa kaa caawin doonta inaad hesho goosashada deeqsinimo leh isteroberi macaan iyo caro.